မရရအောင်ဇွဲနဲ့ကျိုးစားပါ၊ သေချာဖတ်ပါ ၊ရအောင်လေ့ လာပါ၊ လိုအပ်ယင်ကူးယူသွားပါ၊ မြန်မာနိုင်ငံသား အားလုံးအတွက်၊ပညာဓါန မျိုးစေ့များကို အွန်လိုင်းကနေကူးယူရှာဖွေတင်ပြလက်ဆင့် ကမ်းထားတာပါ
အစားအစာနှင့် ကျမ္မာရေးဖတ်ရန် (11)
လောကကြီးတွင်ရုက္ခ-သတ္တဗေဒ အသက်ရှင်နေထိုင်သော-သတ္တဝါတိုင်းသည်-သူ့ နည်းဖြင့်သူ စူးစမ်းလေ့လာ စမ်းသပ်ကြသည်မှာဧကန်မလွဲပါ-ဒီလိုစမ်းသပ်လေ့ လာရင်းနှင့်အောင်မြင်ကျော်ကြားတဲ့လူတွေ-ရှိသလို-ကျရှုံးသွားတဲ့လူတွေလည်းရှိကြပါတယ်-ဒီအထဲမှာ-သင်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့ဟာ-ဟောဒီကမ္ဘာကြီးတွင် သက်ရှင်နေထိုင်နေသမျှကာလပါတ်လုံး-အရာရာအားလုံးကိုစူးစမ်းအောင်မြင်သမိုင်းတွင်ရစ်သော-လှုသားတို့ ဖြစ်ကြပါစေ(ကိုဂေါ်လီ-အလင်းရောင်ကြယ်မှ)
ကော်နက်ရှင် မကောင်းလည်း Youtube ဗီဒီယို ကောင်းကောင်း ကြည့်ရန်
မြန်မာပြည်ကနေ Youtube ဗီဒီယိုကို မထစ်မငေါ့ပဲ ဖြောင့်ဖြောင့်တန်းတန်း ကြည့်ဖို့ဆိုတော့ လောလောဆယ်မှာ မလွယ်ကူတဲ့ အနေအထား တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ သို့ပေမ့ယ် ဒါကို ဖြေရှင်းပေးမယ့် နည်းလေးလေး တွေ့ လိုက်ပါပြီ။ Feather Beta ဆိုတာလေးပါ။ Youtube မှာ ပါတဲ့ Like , Comments, Links နဲ့ ဆိုဒ်ကိုလေးစေတဲ့ အခြားအခြားသော UI နဲ့ Gadgets တွေကို ဖြုတ်ထားပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အောက်ပါ လခ့်ကနေ ဝင်ရပါမယ်။ ပြီးတော့ ပုံမှာပြထားတဲ့ Join "Feather" Beta ဆိုတာလေးကို နှိပ်ယုံပါပဲ။ ပြီးရင် ကိုယ်ကြည့်ချင်တဲ့ Youtube က ဗီဒီယို၊ MTV တွေကို ရှာပြီး ကြည့်လိုက်ရုံပါပဲ။စတင်လုပ်ရန်အောက်ပါလင့် ခ်ကိုနိပ်လိုက်ပါ။
အသုံးပြုလို့ အဆင်ပြေမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်ပါ 1 comment:
ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်ပါ No comments:
နောက်ဆုံးတင်ထားသောပို့ ၁၀ခုစာဖတ်ရန်အရုပ်ပုံသို့ ခေါင်းစဉ်သို့ Read more စာအားကလစ်ပါ
ကမ္ဘာ့ ဆိုင်ကယ်စီး အထူးချ န်ပီယမ်
မိတ်ဆွေတို့ မှအကြောင်းအမျိုးမျိုးအကြံကောင်းလေးများရေးသားနိုင်ပါတယ်
၁-Mobile Chating and Video Call (4)
၂-Phone နဲ့ သက်ဆိုင်သော (13)
၃-Phone မျိုးစုံအတွက် Games (2)
၄-Phone အတွက် Anti Virus (1)
၅-Phone အတွက်မြန်မာအဘိဓာန် (2)
၆-Phone အတွက်မြန်မာပြက္ခဒိန် (1)
၇-Phone အလန်းဇယား Rington (1)
၈-Phoneအတွက် မြန်မာ SMSဆော့ဝဲ (1)
၁၀-iPhoneအတွက် မြန်မာunicode Font
၁၁-i-mobile အတွက် မြန်မာဖောင့်
၁၂-LG G2x ဖုန်းအတွက် မြန်မာဖောင့်
၁၃-Samsung Galaxy မြန်မာဖောင့်
၁၄-Nokia, Sony ဖုန်းအတွက်Games
၁၆-Android ဖုန်းအတွက် မြန်မာဖောင့်
၁၇-IPhone အတွက် မြန်မာဖောင့်
၂၁-မျိုးမြန်မာ မြန်မာဖုန်း ဖောင့်များ
နားထောင်ခြင်Playနိပ်နားညီးယင်stopနိပ်အသံချဲ့ ခြင်ယင်ဘေးကစပီကာပုံလေး မောက်နဲ့ ကလိပါ The Carpenters - Top of the World.
ဒီမှာမိတ်ဆွေအခုလက်ရှိထိုင်နေတဲ့ အင်တာနက်ကုဒ်နံပါတ်လိပ်စာသေချာမှတ်သွားပါ ------------------------
၁-ပိုက်ဆံနဲ့ ဝယ်စရာမလိုပဲ မိမိဘာသာgmail အကောင့် လုပ်...
၂-လွယ်တကူ သယ်ဆောင်နိုင်မဲ့ Chat များ Imo , MSN ,Gta..
၃-TeamViewer ဖြင့် ကွန်ပျုတာအချင်းချင်း ပြုပြင်ပေးခြင်း
၄-သင့်ကွန်ပျုတာအတွက်လိုအပ်နေသာCcleaner အပေါ့ စားဆော့ဝဲလ်
၆-Gmail အကောင့်ဟောင်းမှ လူများကို အကောင့်အသစ်ထဲသို့ ...
၇-Core i3,Core i5,Core i7 ကွာခြားချက်များ
၉-Gmail အတွက် အစွမ်းထက်နည်းလမ်း (၈၀)
၁၀-အီးမေးပါတ်စ်ဝှက်နှင့် အချက်လက်များခိုးယူနိုင်သည် အကြောင့်း...
၁၁-Blue ScErrorဖြေရှင်းနည်း (၂)
၁၂-XP Talk တစ်ခုဖန်တီးကြည့်ချင်
၁၄-ကွန်ပျူတာ မြန်ဆန်စေချင် နည်းလမ်း(၁)
၁၆-Windows7အားနည်းချက်တခု
၁၇-Windows7၏ထူးဆန်း Shortcut key နှစ်ခု အကြောင်း
၁၈-Windows7ကို လျင်မြန်စွာအသုံးပြုနိုင်မည့်အချက်မျာ...
၁၉-Window XP ရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်များ...
ရော့ ဒီမှာဆော့ ဖ်ဝဲလ်တွေအလကားယူကြ
1. CCleaner 3.23.1823
2. Adobe Reader 10.1.4
3. Skype 5.11.0.102 Beta
4. Avast! Free Antivirus 7.0.1466
5. Firefox 16.0 Beta 6
6. Flash Player 11.5.500.85 Beta (IE)
08 Oct 12 - Google Drive 1.5.3449.3345
08 Oct 12 - Adobe Air 3.4.0.2710
08 Oct 12 - Flash Player 11.4.402.287 (Non-IE)
08 Oct 12 - Flash Player 11.4.402.287 (IE)
08 Oct 12 - ClamWin 0.97.6
08 Oct 12 - SeaMonkey 2.13 Beta 6
Flash Player 11.4.402.287 (IE)
AVG Free Edition 2013.0.2677 (32-bit)
Thunderbird 16.0 Beta 4
Sandra Lite 2012 SP5c (18.74)
ဖရီးAnti Virus Softwere များသုံးရန်
၁-· Ad -Aware Free Anti Virus
၂-· Avast Free Anti Virus
၃-· AVG Free 2012 Edition
၄-· Avira Free Edition
၅-· Malbytes Anti Malware
၇-· Miscrosoft Security Ess.
၁၀· Security 360
1.	Recent Comments Widget
မောင် ( စွယ်စုံကျမ်း ) Website မှာ Download လုပ်မရဘူးလို့ ပြောနေကြသူများ ဒီမှာ ဖတ်ပေးကြပါ
ညစ်ညမ်းဝက်ဘ်ဆိုက်များအတွက် သီးခြား Search Engineတစ်ခု စတင်လည်ပတ်လာတော့မည်ဟု သတင်းများက ဖော်ပြခဲ့သည်။ အသက်(၁၈)နှစ်အထက် မကြည့်ရှုသင့်ဟု သတ်မှ...
ဆက်လက် ဖတ်ရှု့ ပါ
ကမ္ဘာ့အဆိပ်အပြင်းဆုံး သစ်ပင်လို့ အသတ်ခံထားရတဲ့ အပင်ကတော့ Manchineel အမည်ရ သစ်ပင်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။၁၅ မီတာအထိ ရှည်နိုင်တဲ့ အပင်မျိုး ဖြစ်ပြီး...
လူ့လောကမှာ လိင် နဲ့ပတ်သက်ရင် ကျားနဲ့ မ ၂ မျိုးရှိတာ အများစုကြီးပါ။ ဒါပေမယ့် ရှေးစာဆိုတွေအရ လိင်ဟာ ၄ မျိုးရှိပါတယ်။ ကျားလိင်၊ မလိင်၊ လိင်မဲ့...
ဖုန်းခေါ်ရာမှာအရမ်း အသုံးဝင်တဲ့ APK လေးပါ ProXimity-Talk-v1.24
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မောင်တောမြို့ တောင် ပိုင်း အလယ်သံကျော်ကမ်းခြေနဲ့ ရသေ့တောင်မြို့နယ် အငူမော် ကမ်းခြေတဝိုက်မှာ တရုတ်နိုင်ငံ အခြေစိုက် Gold ...
မက်ဆာချူးဆက်ပြည်နယ် နော်သမ်တန်မြို့၌ နေထိုင်သော အေပရယ်ဘရစ်အမည်ရှိ အမျိုးသမီးသည် ထူးခြားသည့် ငှက်သံတစ်သံကိုကြား၍ သူ၏နောက်ဖေး မြေကွက်လပ်သို...
တိုင်တန်းနစ်သင်္ဘောကြီး နစ်မြုပ်ပြီး နှစ်တစ်ရာခန့် ကြာသောအခါ ထိုတိုင်တန်းနစ်သင်္ဘောကြီးနစ်မြုပ်ရခြင်း၏ တရားခံကို သိပ္ပံပညာရှင်တို့ ရှာဖွေတွေ့ရှ...
ဟေ့ လူတွေသိပ်မရယ်ကြနဲ့ဗျာ .. အ..ဟားဟားဟား..ဟီးဟီးဟီး
ဆာဟာရ ရဲ့ ကမ္ဘာ
Nokia X, X+ and XL များကို root ဖောက်ခြင်း
Get Windows 8 Ultimate Final Crack+Activator Full Version Free Download
http://api.ning.com/files/1Hiy9REBGcY9S048fi*nDFmaobq8g2*g1DYWQL4hVTwU7K2oZltIbzyL4XlTLaXxJl4I-WrSu. Awesome Inc. theme. Powered by Blogger.